Ogaden News Agency (ONA) – Tuulada Aloosane ee Degmada Fiiq Maxaa u Danbeeyay Muuqalkan Naxdinta leh Daawo
Tuulada Aloosane ee Degmada Fiiq Maxaa u Danbeeyay Muuqalkan Naxdinta leh Daawo
Posted by ONA Admin	/ June 14, 2013
Waxaa inbadan wakaalada Wararka Ogadeniya ay soo tabinaysay deegaamo badan oo kamid ah dhulka Ogadeniya oo lagubay, ama labaro kiciyay dadkii iyo duunyadii ku dhaqneydba. Magaaloyin badan oo ciidamada gumeysiga Ethiopia halaageen dadkii ku noolana ay u daad gureeyeen xabsiyada waaweyn ee Ethiopia waxii ay dileen ama ka anbaday dhulkoodi hooyo ee qixii xeryaha qaxootiyada kusoo galay mooyaane.
Muuqaalkaas kore waxaad ku arkeysaan waa Tuulada Aloosane oo wax yar u jirta Magaalada Fiiq. Tuuladaas oo Ciidamada gumeysiga Ethiopia dadkii daganaa xoog kaga saareen magaaladoodi iyaga oo intoodi badnaa dadkaas u taxaabay jeelka Magaalada Fiiq iyo xabsiyada waaweyn ee gumeysiga ee uu kamidka yahay Jeel Ogaden.
Waxaad arkeysaan muuqaal naxdin leh, magaaladii oo keyn noqotay kadib markii muddo badan aan wax dhexmara oo dad ah aysan jirin. Waxaa guriyihi iyo wadooyinkii xaafadaha u dhaxeeyay ka baxay geedo waaweyn iyo keyn. Waxaad arkaysaa guryihii oo dumay.
Waxaad garan kartaa uun in magaalo ahaan jirtay dad ku noolaayen markii aad aragto dhismaha guryaha oo qaarkood wali sii qotomaan.
Muuqaalkan waxaa lasoo duubay maalinimadi Jimcaha 14/06/2013. Waxuuna ka turjumaya xaalada dhabta ah ee shacabka Somalida Ogadeniya ku noolyihiin.
Waxaa dhowaan daawan doontaan filimaan badan oo kale oo lamid ah tuulada Aloosane oo iyana dhowaan laga soo duubay gudaha Ogadeniya. Filimadaas oo muuqaal tayo sare lagu soo duubay waxaad ku arki doontaan arrimo intii ogeydna ay ku cimriqaadan intaan lasoconina ay ku waayo arki doonaan.